Ngokutsho kweFeng Shui, yonke imibala ihlukaniswe ngokuthi "yin" kunye ne "yang". Amandla afanelekileyo akhiwa endlwini apho ukuvumelanisa phakathi kwe "yang" ne "yin" kubusa. Kukholelwa ukuba ukuphumeza ngokuvisisana noncedo lombala kulula kakhulu. Ukwenza oku, kufuneka nje ukwazi ukuba luhlobo luni lwamandla okanye loo mbala unayo nendlela yokulahla ngayo.
Ixabiso lombala ngu-feng shui
Kukholelwa ukuba umbala obomvu unamandla kakhulu. Ivuselela, ivuselela, ivuselele amandla abalulekileyo. Phakathi kwezizwe zaseMpuma, luphawu lwempumelelo kunye nolonwabo. Kodwa ngelo xesha likwaye umbala womsindo, umonde. Kukholelwa ukuba inokubangela ingxabano ebomini bomntu. Ngako oko, lo mbala kufuneka usetyenziswe ngokucophelela kwaye ngokuzithandela, ukufaka isicelo sokuhlobisa loo magumbi apho ubomi bubuhlungu khona, apho kuninzi ukuhamba kunye namandla.
Umbala we-Orange unxibelelwano, uvuselela. Kukholelwa ukuba kuthintela umsebenzi wengqondo, kukhuthaza umsebenzi wengqondo. Ukugqwesa kumagumbi apho kukho iintlanganiso, iingxoxo apho zisebenza khona ngengqondo.
Oluhlaza luphawu lohlobo lwentwasahlobo, ukuzalwa kwakhona kunye nokuqala kobomi. Kunceda ukususa uxhalaba kunye nokuxhalaba, kuvelisa umqondo wokuvisisana nokuthula, kuba umbala wendalo. Ngo-Feng Shui, oluhlaza luhlobo lomxolo noxolo.
Ephuzi luphawu lwethemba nethuba. Kwaye akukho yingozi, ngenxa yokuba iphuzi - umbala welanga, iyakhupha iindawo ezimnyama nakumnyama kakhulu zendlu. Ngaphezu koko, umbala ophuzi unceda ekufumaneni ubulumko kunye nombono wehlabathi.
Umbala weGolide, ufana nohlobo oluphuzi, njengoko kunokudala umoya othembekileyo kunye nomoya. Nangona kunjalo, kukholelwa ukuba igolide inamandla kunamandla, inomdla nokuhlonipha. Intsebenziswano yayo ebomvu ibonakalisa inhlanhla kunye nobutyebi.
I-Purple isimboli somoya ocebileyo kunye neengcinga eziphakamileyo. Uphefumlela, uhlakulele iingcamango, avelise amaphupha kwaye adala umoya wokudala. Umbala onemibala unika umuzwa wommangaliso okanye into engacacanga.
I-Blue isimboli yobulungisa nokuzaliseka kweminqweno. Kodwa ngakolunye uhlangothi, ukugqithisa okwebhakabhaka ngaphakathi ngezinye izinto kubangelwa ukungahambi kakuhle, ukungaqiniseki, uxinzelelo kumntu.
Umbala obomvu uyisimboli sokuzinza nokuthula. Kwiindawo ezihlotswe ngalo mbala, kulungile ukuphumla nokuphumula. Kukholelwa ukuba umbala obomvu unethemba kwaye umnika umntu ukholo kwikusasa lakhe elingcono. Yingakho abantu bahlala behobisa amakamelo ngamathoni ahlaza okwesibhakabhaka.
Umbala omhlophe uyisimboli yengqondo, ubumsulwa, ubumsulwa. Ngamaxesha onke waxosha ubudlelwane nobungcwele, ubuhle. Kukholelwa ukuba umbala omhlophe uhlambulula amandla kwaye unokwenza lula ubomi bemihla ngemihla. Kuhle ukusetyenziswa emhlophe kumagumbi adibeneyo, kunye namagumbi apho kubalulekile ukuba uzive ucocekile kwaye ucocekile.
Umbala omnyama uyisimboli sokusemthethweni nokufezekiswa, ubuchule kunye negunya. Kusetyenziswa kakuhle kwi-intsile ukwenzela ukudala i-businesslike and atmosphere.
Kukho nolwazi oluqhelekileyo ukuba "yin" kunye ne "yang" zichasene ezimbini. Kuphela xa zidibanisa, zifumana ukunyaniseka, ukugqiba kunye nokuvisisana. Ukusebenzisa imibala kwi-design yangaphakathi ngokwemigaqo ye-feng shui, kufuneka ukwazi ukuba "yang" isiqalo somntu sikhanya, sifudumala, sisilungileyo. Imibala yayo ibomvu, iphuzi, i-orange, emnyama. "Yin" - umgaqo wesibhakabhaka ubumnyama, kubanda, kungabikho. Ihamba kunye nomhlophe, umbala ohlaza okwesibhakabhaka, oluhlaza. Ngokubhekiselele kumbala we-violet, ingaba ne-energetics eyahlukileyo kuxhomekeke kumbala ohamba nawo. Kukholelwa ukuba obomvu obomvu bubonisa "yang", kwaye i-purple violet ibonisa "yin".
Ngokutsho kwe-feng shui, imibala "yang" kunye ne "yin" kufuneka ihlale ihamba nomhlobo, isetyenzisene kunye, oku kuya kunceda ukufezekisa ukuvisisana. Ezinye izisombululo zombala ekwakheni kwamagumbi e-feng shui.
Umbala wefeng shui
Igumbi lokuhlala. Ngokuqhelekileyo, le yona igumbi elibanzi kakhulu endlini. Injongo yalo kukufumana iindwendwe. Ngokumalunga nale nto, inokuthi ifakwe kumbala obomvu, ophuzi kunye nolunxwemeni. Ngokuqhelekileyo bazama ukuphelisa i-soft tones eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okanye emhlophe. Ukuba igumbi lokuhlala lisetyenziselwa ukuphumla kwintsapho, ke kungcono ukusebenzisa imibala yegolide kunye nembala eluhlaza.
Ikhitshi indawo "efudumeleyo", into engcono ukuba yenze kuyo nayiphi na imibala ebomvu, i-yellow, i-orange. Ngokutya, kulungile ukusebenzisa izinto ezahlukeneyo zeikhikhini (iibhulaphu, izitya) kumnyama omnyama okanye ohlaza.
Igumbi lokulala. Ulwakhiwo lwalolu gumbi kufuneka lunike ingqiqo yoxolo kunye nentuthuzelo endlwini. Kulo, kungcono ukusebenzisa i-shades epholileyo, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza okothuliweyo ngaphezu kwezinto ezikhanyayo ezibomvu nombala obomvu.
Igumbi lokuhlambela. Imibala efanelekileyo kakhulu kuyo nayiphi na i-pastel shades ebanda kakhulu kunye nemibala efudumeleyo. Ngokomzekelo, i-saladi enama-milky kwaye ingekho i-green, ipayipi, kunye ne-orange, i-pinki, ingabomvu, i-blue blue, kunye ne-blue. Ukwahlukana okugqithisileyo okuthunyelwe "yin" okanye "yang" kwindawo yokuhlambela kuza kunika izinto ezithile, umzekelo, umbhoxo, ityhubhu, izixhobo zokuhlamba.
Igumbi labantwana. Xa yenzelwe, unokulandela imigaqo ye-feng shui, kodwa kungcono ukugcina isimo sengqondo nesimo somntwana esitsha. Akunconywa ukusebenzisa i-shades ebomvu ebomvu ngaphakathi kwigumbi apho umntwana okhuselekileyo ehlala khona. Ubuluhlaza asisebenzisi kubantwana abangenayo i-inert ne-phlegmatic. Igumbi lesikole kufuneka lihlotshwe ngebala, eliluhlaza, elitraktta, kwigumbi labantwana abancinci emhlophe, eluhlaza okwesibhakabhaka, epinki, e-peach, embala e-lilac.
Ngelishwa, ngokuqhelekileyo kukho iimeko apho imibala oyithandayo icetyiswa ukuba imibala ye-feng shui ayihambelani. Kule meko, kungcono ukuphulaphula ilizwi langaphakathi, kuba i-Feng Shui ayikho isikhokelo sokwakhiwa kwezinto zangaphakathi. Okokuqala, indlu kufuneka ihlaziye kwaye ikhululekile. Ungesabi ukuzama imibala eyahlukeneyo yemibala ukufumana ukhetho olufanelekileyo kakhulu kwikhaya lakho.
Izityalo eziqhumisayo zendlu yethu
Ukulingana komsebenzi nobomi bomntu
I-Pancreas iyilungu lesigxina
Ubusi buhlamba ubuhle kunye nempilo yomzimba
Ungakulibala njani umfana?
I-Vertigo: ukungahambi kakuhle kokuhamba
I-Psychology yobudlelwane phakathi komama kunye nentombazana eselula
Ukuba umntu udala, ngaba kufuneka asebenzise imali entombazana?